Lo mzekelo usetyenziswa kumacala omabini abathuthi abakhethiweyo kunye nesikali seqonga le-elektroniki kumzi-mveliso wokulungisa ukutya, njengendawo yokuthutha isithinteli emva kokuhlelwa kobunzima. Lo mhambisi wamkela ibhanti lemodyuli ye-HONGSBELT® HS-400A kwaye isebenzisa uphawu lwayo lobuncinci bedayamitha ye-sprocket (17mm) ukwenza mfutshane umgama ngokhetho lokuhambisa.
Indlela yokuqhuba yomqhubi yi-center drive; iyakhutshwa kwaye iyacoceka. Ukufunyanwa kwe-elektroniki kunye nolawulo oluzenzekelayo lwenza ibhanti liphumle kunye neenkwenkwezi ngexesha elifutshane kakhulu, kwaye ibhanti nayo kufuneka isetyenziswe kwioli, ubushushu obuphantsi kunye nokusingqongileyo okufumileyo.
Lonke uthotho lweemveliso ze-HONGSBELT® zisebenzisa izinto eziqinisekisiweyo ze-FDA. Kwinkqubo yokuthutha yokupakishwa kokutya okuhleliweyo, i-HONGSBELT® iya kuba lolona khetho lwakho lungcono. Iinzuzo ezininzi kunye neenkcukacha malunga nebhanti yokuhambisa i-HONGSBELT®, nceda ubhekisele kwezinye iinkcazo kwesi sahluko.